PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - UKHALE NGOBUVILA UKOMPHELA EDLIWA
UKHALE NGOBUVILA UKOMPHELA EDLIWA
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Ezemidlalo - SIYABONGA NXUMALO
UKHALE ngobuvila kubadlali bakhe usteve “Mphathi” Komphela ( osesithombeni) ongumqeqeshi webloemfontein Celtic iguqiswa yifree State Stars ngo-2-0 kowe-absa Premiership izolo ngomgqibelo ntambama egoble Park, efree State.
Amagoli okunqobe ngawo istars abhakuziswe enethini nguharris Tchilimbou ngomzuzu ka-38 nosinethemba Jantjie ngoka-58.
Emuva kwalo mdlalo, ukomphela ukhale kakhulu ngokungalandeli imiyalelo yakhe kwabadlali beceltic esibukeka isiphelelwa wumfutho eqale ngawo isizini njengoba ibingagayelwa mphako phambilini.
“Abadlali kabawukhombisanga umdlandla wokulwela ukunqoba lo mdalo. Kabayilandelanga imiyalelo yami. Besinalo ithuba lokunqoba lo mdlalo kodwa sazenzela thina phansi. Sekumele siqale silungiselele umdlalo olande- layo esizowugijima nebaroka,” kusho ukomphela.
Uluc Eymael wasebelgium ololonga istars, ujabule kakhulu ngokuqoqa amaphuzu amathathu kulo mdlalo womkhaya basefree State.
“Bengivele ngishilo ukuthi sizowunqoba lo mdlalo kwazise siyiqembu elihle kakhulu, elinabadlali abahle nabaqeqeshi bezinga eliphezulu. Empeleni bekumele sinqobe ngembudlu yamagoli kulo mdlalo ukuba abadlali bami abazange bawamoshe amanye amathuba,” kusho u-eymael.
Imaritzburg United iqhubekile nokulahla amaphuzu kungenasidingo ibambana necape Town City ngo-0-0 isekhaya ngolwesihlanu ebusuku eharry Gwala Stadium, emgungundlovu.
Iteam of Choice kayenzi kahle selokhu kuqale isizini okwenza ibalwe namakilabhu alwela ukusuka emsileni ekubeni ngesizini edlule ibingagayelwa mphako okuyenze yaqeda isizini ikwi- top 8.